Boeny: nampian-trano ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony hanatsarana ny PND | Région Boeny
Faritra be mpisafidy indrindra hanaovana fihaonambe sy atrik’asam-pirenena i Boeny. Tsy latsaky ny roa na telo isam-bolana izany mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ary indray mandeha isaky ny roa volana amin’ny an-davan’andro. Anisan’ny noraisin’ny faritra Boeny, tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga, ny faram-paran’ny volana oktobra teo ny famaranana ny fakan-kevitra ifotony ho fanatsarana ny Drafitr’asam-pirenena momban’ny fampandrosoana na PND (Plan national de développement) rehefa avy nitety ireo faritra 21 hafa ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny teti-pivoarana, izay mpamolavola izany.
Ny fanjakana tsara tantana, ny fitadiavana fanohanana ara-toekarena, ny fanatsarana ny lafin-tany, ny fampandrosoana maharitra sy ny maha olona, ary ny fitantanana ny tandindon-doza sy ny loza voajanahary. Ireo no loha-hevitra nodinihin’ireo Lehiben’ny Faritra efatra sy ireo talem-paritra ary ny tompon’andraikitra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana rehetra ato anatin’ny Faritany Mahajanga hampidirana ao anatin’ny PND ireo hetaheta sy soso-kevitry ny avy aty ifotony.
Anisan’ireo tsoa-kevitra nisongadina, niainga tamin’ny hetaheta sy soso-kevitry ny avy aty anivon’ny faritra ny fananganana ny fandriampahalemana maharitra iraisana, ny lafiny fitanterana toy fanamboarana ny lalamby, ary ny fanatsarana ny bankin’ny fampandrosoana.
Fanambin’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny teti-pivoarana hoy ny Sekretera jeneraly, Atoa Randrianarison Jean Gabriel, izay taty an-toerana, ny hanara-maso sy hanao tomban’ezaka amin’ny fampiharana ireo tsoa-kevitra rehetra nandrafetana ny PND, ka ireo Sampandraharam-paritr’ity ministera ity no hisahana izany aty ifotony.
Miandrandra fatratra ny fiantraikany tsara ateraky ny PND amin’ny fiainam-bahoaka izahay hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny ary mba ho drafitra hipetraka ho reharehan’ny taranaka fara-mandimby izy ity, hoy izy.